Fiqi: Wareysigii madaxweynaha “Nin kaligiis garramay” - News - Wararka - Somali Forum - Somalia Online
Axmed Macallin Fiqi oo ah Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay wareysi uu maalmo ka hor bixiyey Madaxweyne Farmaajo.
Fiqi waxa uu sheegay in aan madaxweynaha wax laga weydiin doorashadii Galmudug, is araggii isaga iyo Muuse Biixi, dhammaystirka dib u eegista dastuurka, arrimaha is dhexgalka geeska Afrika, dhiibistii Qalbidhagax iyo dalka sida doorasho uga dhacayso haddii khiaaf ka dhaxeeyo dowladda Federaalka iyo qaar kamid ah dowlad goboleedyada.
Xilshibaan Fiqi wuxuu sheegay in Madaxweyne Farmaajo uusan u muuqan nin raba inuu dhammeeyo khilaafka kala dhexeeya dawlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, maadaama uu ku tilmaamay kuwo u shaqeeya shisheeye.
Sidoo kale Xildhibaan Fiqi waxa uu tilmaamay in jawaabaha uu ka bixinayey madaxweynuhu su’aalaha la weydiiyey badankoodu aysan ahayn kuwo is leh, wuxuuna sheegay in lagu tilmaami karay “Nin kaligii garramay”.
The post Fiqi: Wareysigii madaxweynaha “Nin kaligiis garramay” appeared first on Puntland Post.